Bale iyo Toni Kroos oo seegi kara kulanka Sevilla ee Super Cup-ka yurub – Gool FM
Bale iyo Toni Kroos oo seegi kara kulanka Sevilla ee Super Cup-ka yurub
Liibaan Fantastic August 1, 2016
(Madrid) 01 Agoosto 2016 Kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa fasixii u dheereeysay ciyaartoydeeda kala ah Gareth Bale iyo Toni Karoos waxaana loo badinayaa inay seegaan kulanka Sevilla.
AS ayaa baahisay in tababare Zidane uu talo ka helay tababaraha dhanka taam ahaanshaha ee Real Madrid ee Pintus taas oo ah in fasaxa loo dheereeyo Bale, Kroos iyo Pepe maadama aysan ciyaari karin Super Cup-ka yurub ee 9-August.
Gareth Bale iyo Toni Kroos ayaa dib ugu soo laabanaya tababarka kooxda 6-da August, waana 3-maalin ka hor Super Cup-ka yurub oo lagu ciyaari doono Norway, taas ayaana ka dhigan inay adagtahay inay ciyaaraan kulankaas.
Pepe iyo Ronaldo ayaa dhankooda dib u soo laaban doona 10-ka August waana maalin kadib marka laciyaaro kulanka Super Cup-ka yurub.
Dhamaan ciyaartoydaan ayaa la filayay inay dib ugu soo laabtaan kooxda 31-July laakiin haatan waqtiga soo laabashadooda ayaa la kordhiyay.
Schalke04 oo xaqiijisay in Leroy Sane uu tijaabada caafimaadka u marayo Man City
RASMI: Laacibkii AC Milan Jeremy Menez oo ku biiray Bordeaux...(Lambarkee loo xiray)+SAWIRRO